ရေဘေးအတွက် ဓာတ်သေလေးတွေရမယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Photography » ရေဘေးအတွက် ဓာတ်သေလေးတွေရမယ်	8
Posted by ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ် on Aug 12, 2015 in Photography | 8 comments
ကျွန်တော့ website NayOkkar.com မှာ လွှင့်တင်ထားသော ပုံများကို ရေဘေးအတွက် ၀ယ်ယူလှူဒါန်းနိုင်ပါသည်.။
+++ ဈေးနှုန်း ၁၅၀၀၀ ကျပ် မှ ၅၅၀၀၀ ကျပ်ထိ အစားစား သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဈေနှုန်းများကို website မှာကြည့်နိုင်ပေမယ့် အဲဒါဟာ သတ်မှတ်ချက် တစ်ခုသာ ဖြစ်ပြီး မိမိ တတ်နိုင်တဲ့ ပမာဏ အတိုင်း ညှိနှိုင်း ၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ဒီပုံကို ဒီဈေးရမှ ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး. ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံရဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဈေးကိုမတတ်နိုင်ဘူးဆို ရင် ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ဈေးပေးပြီး ၀ယ်ယူ လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီဓာတ်ပုံကိုပဲ ၀ယ်ယူလိုက်တဲ့ ဈေးနှုန်းခြင်း ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။
ကျနော့အနေနဲ့ ၀ယ်ယူတဲ့ သူလဲ ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ ဈေးနဲ့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပုံကလေး ရရှိသွားစေချင်လို့ပါ။
ဈေးနှုန်းနဲ့ ID တွေကို website ထဲမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်.
ဓာတ်ပုံများကို ဘောင်နဲ့ထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး အောက်ပါ အတိုင်းပြန်ထုတ်ပေးပါမယ်။
(၁၅၀၀၀ အတွက် 10 in x 15 in ကို ဘောင်အသေး)
(၂၅၀၀၀ အတွက် 12 in x 18 in ကို ဘောင်အသေး)
(၃၅၀၀၀ နဲ့ အထက်ကို 12 in x 18 in ကို ဘောင်အကြီး) နဲ့ ထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၅၀၀၀ နဲ့ ၃၅၀၀၀ size နဲ့ frame ကွာပါတယ်.. အမှန်တော့ အရင်တူတူပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၂-၁၈ ကို frame အကြီးနဲ့ထုတ်ရင် ဓာတ်ပုံထုတ်ခနဲ့ ကုန်ကျစရိတ် တစ်ပုံကို ၆၃၀၀ ကျသွားပါတယ်. အဲဒီအခါမှာ ကျနော့်အနေနဲ့ ၁၅၀၀၀ လောက်ထဲက ၆၃၀၀ ထုတ်လိုက်တဲ့ အခါ တကယ့် လှူမယ့်ငွေ ပမာဏ နည်းသွားတဲ့ အတွက်ပါ..
အဲဒါကြောင့် ၁၅၀၀၀ တန်ကို ၁၀-၁၅ size နဲ့ frame အသေး.. ၂၅၀၀၀ တန်ကို ၁၂-၁၈ size ကို့  frame အသေး၊ ၃၅၀၀၀ နဲ့အထက်ကို ၁၂-၁၈ size frame အကြီးနဲ့ ထုတ်ပေးနေပါတယ်..
+++ ၀ယ်ယူလိုက်တဲ့ ငွေထဲက ဓာတ်ပုံကူးခနဲ့ ဘောင်ဖိုး တွေထုတ်နှုတ်ပြီး ပြန်လည် လှူဒါန်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
12×18 size နဲ့ 10×15 size ပါ
ဂဇက်ထဲက လက်ရှိ အားပေးထားကြတဲ့သူများကတော့
ဓာတ်ပုံတွေ ကို hard copy အနေနဲ့ပေးအပ်မှာ ဖြစ်ပြီး ချိတ်ဆွဲရန် အတွက်သာ ဖြစ်ပါတယ်.. မိမိ စီးပွားရေးအတွက် ကူးယူခြင်း၊ ပြန်လည် ရိုက်နှိပ်အသုံးချခြင်း၊ မပြုရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်.. မိမိ စီးပွားရေးအတွက် softcopy အနေနှင့် လိုအပ် ရင်တော့ သီးသန့် ၀ယ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်.
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံပေါ်ကိုလက်ထောက်ပြီး အထဲကပုံတွေ ကိုဆက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်
အထဲကပုံတိုင်းအောက်ခြေမှာ ဈေးနှုန်း နဲ့ ID နံပါတ်ပါပါတယ်.. ၀ယ်လိုတဲု့ပုံရဲ့ ID ကိုပြောပေးရင်ရပါပြီ။
ဆက်သွယ်ရန် Nay Okkar 09 26 1600061 nokphotos@gmail.com
အောင် မိုးသူ says: ဒီလ ငွေပြတ်သွားလို့ အားပေးချင်ပေမယ့် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဘာမှ လာမပြောနဲ့။
သများ ငပိရည်ဆိုင် ဖွင့်ရင် သုံးပစ်မှာ။
kai says: ကမ္ဘာ့မူပိုင်ဥပဒေအရတော့…ဓာတ်သေသမားရဲ့.. မူပိုင်ခွင့်ဟာ.. ဓာတ်ရိုက်သူထံမှာပဲရှိတယ်တဲ့…။
ငပိရည်ဆိုင်ဖွင့်လို့ဓာတ်ပုံယူသုံးရင်.. မူပိုင်ခွင့်အတွက်.. ငပိရည်အ၀ယူသာသောက်..ဓာတ်သေဆရာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ဇီဇီခင်ဇော် says: အာ့ဆို နောက် ဆို ဝယ် စာ လိုတော့ဘူးးးပေါ့။
မူပိုင်ခွင့် မရတဲ့ တူတူ ခိုးမယ်။
manawphyulay says: ၀ယ်တဲ့သူတွေက မူပိုင်ခွင့်မပေးဘူးပေါ့နော်…. အွန့်
kai says: ပန်းချီကားကျ.. ၀ယ်သူက.. အဲဒီပန်းချီကိုထပ်ပုံနှိပ်ခွင့်အပါအ၀င် မူပိုင်ခွင့်ရတယ်တဲ့..
ဓတ်ပုံကျ.. ၀ယ်ထားသူက.. ထပ်ပြီးပုံနှိပ်လို့မရသလို.. ကော်ပီပွားသုံးစွဲလို့မရဘူးတဲ့ဗျ…။
ဓတ်ဆရာကျ.. အဲဒီတပုံထဲ.. အကြိမ်ကြိမ်ပုံကူးရောင်းစားနေလို့ရတယ်တဲ့..။
ဗဟုသုတ… ပြောပြတာပါ..။ အခုဓတ်ဆရာက.. သူ့ပုံကိုလှူဖို့ရောင်းမှတော့.. စွန့်လွှတ်စိတ်ထားပြီးပုံရပါတယ်..။
ကျုပ်လည်း.. မနက်ဖြန်ကျ.. မြန်မာပြည်လှူဖို့.. ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေသွားဝယ်ရဦးမယ်..။
လူကြုံက.. ၂သေတ္တာစာဆေးတွေ.. အခမယူ..လေယဉ်နဲ့သယ်ပေးမယ်ဆိုတာမို့ပါ…။
Alinsett @ Maung Thura says: အနုပညာသည် ပြည်သူ့အတွက် ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံများးးး ပြန်ကြားမိလေပြီ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဓါတ်ပုံရောင်းကျတာတော့ ဥပဒေရယ်လို့  မရှိပေမယ့် ကိုယ်လိုချင်တဲ့အပေါ်မှာ မူတည်ပြီးကြေးသတ်မှတ်ကြပါတယ်။
ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို အပြီး အပြတ်ယူမယ် ဒီဓါတ်ပုံကို အခြားနေရ လုံးဝ မသုံးရ ဆိုရင် ဈေးတစ်မျုိး
အခု အခြေအနေကတော့ရေဘေးအတွက်မို့ အခြေခံဈေးသတ်မှတ်ပေမယ့်